Iindaba - Yintoni iyunithi yamandla e-hydraulic
Iyunithi yamandla e-hydraulic (i-HPU) isetyenziswa njengesixhobo sonikezelo lweoyile, edityaniswe kwiisilinda ezininzi zamanzi ngenkqubo yombhobho wangaphandle ukulawula isenzo seeseti ezininzi zezivalo.
Itanki yezibaso, impompo yamafutha kunye nefani yamandla efeni yenkqubo yemithombo yeoyile evaliweyo ezimeleyo. Isikhululo seoyile sinokuxhotyiswa ngenkqubo yolawulo lwe-PLC, elawula yonke imisebenzi yangaphakathi ye-hydraulic kwaye ivelise imiqondiso kwaye ilawule itanki yeoyile, impompo yeoyile kunye nefowuni yamandla efeni ukwenza inkqubo yemithombo yeoyile evaliweyo ezimeleyo. Isikhululo seoyile sinokuxhotyiswa ngenkqubo yolawulo ye-PLC, elawula yonke imisebenzi yangaphakathi ye-hydraulic kwaye ivelise imiqondiso kunye nolawulo.
Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, impompo yeoyile ibonelela ngeoyile kwinkqubo, igcina ngokuzenzekelayo uxinzelelo lwenkqubo, kwaye iyaqonda umsebenzi wokubamba ivalve nakweyiphi na indawo ngokuvimba ivalve yolawulo: kwimeko yokusebenza, i-hydraulic actuator ilawulwa yi-solenoid valve kunye nenkqubo yokuyalela uphawu Sebenzisa i-valve ye-solenoid ukulawula uxinzelelo lweoyile kunye nokukhululwa kwamandla kwe-accumulator, kwaye ulawule i-valve ye-cylinder ye-slide ye-valve, uqhube i-valve ngokusebenzisa indlela yokuhambisa umatshini, kwaye usebenzise ukuvalwa ngokukhawuleza, ukuvula okuqhelekileyo nokuvala kunye nolawulo lovavanyo.
Isilinda soxinzelelo oluphezulu sinokumiliselwa kwisiqu sevalve okanye sisetyenziswe ngokuthe ngqo njengesixhobo sokuqhuba. Intsalela yeoyile ye-hydraulic ibuyiselwa kwisikhululo seoyile se-hydraulic, ukuze inkqubo yombhobho isebenzise ipayipi yokubuyisa ioyile enye ukubuyisela umbhobho weoyile ukulawula iivevithi ezininzi ezidityaniswe ngokufanayo. Esi sikhululo samanzi sinobuchwephesha bokuqhuba ngokukodwa sisetyenziselwa ukulawula inyathelo levalve yomphunga kunye nee-actuator zenkqubo yokugqitha iiturbine.
Iyunithi yamandla ilungiselelwe iimeko ezahlukeneyo zesicelo, umzekelo, inokusetyenziswa kwiilori ezibaleka kwiindawo ezinobunzima, okanye zisetyenziselwa iimeko zokuphatha umsebenzi onzima ixesha elide, kunye nezinye iimeko ezifuna ukusebenza okuphezulu kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu.
Iziphumo liqonga elahluka kakhulu, kusetyenziswa izinto ezisemgangathweni, ezinokujamelana neemeko ezininzi zesicelo ezifunwa yimarike. Uluhlu lwabathengi lwezixhobo ze-hydraulic luyacuthwa ukuya kwinqanaba elincinci, kwaye umthwalo wokuyilwa kwezinto ezingekho semgangathweni uncitshisiwe. .
Ikwanciphisa kakhulu umthwalo woyilo olungaqhelekanga. Umzekelo, iyunithi yamandla e-HE yakhiwe kwiqonga elahlukileyo. Ubungakanani beemoto ezivunyelweyo ukusuka kwi-80 ukuya kwi-132mm (0.3 ~ 4.5kw), kunye nokususwa kwempompo ukusuka ku-0.24 ukuya ku-5.7cc. Iyunithi yamandla inokulawula iisilinda ezi-4 zamanzi. Icandelo eliphambili lenkqubo yiadaptha. Kukho iindlela ezimbini ezahlukeneyo. Inemilo eyahlukeneyo kunye neendlela zokufaka.